Nhoroondo yekambani - Hebei Marshine Machinery Kugadzira Co., Ltd.
HEBEI MARSHINE MACHINERY KUKUNDA CO., LTD
HEBEI MARSHINE kambani (MAPLEFRP®) yakavambwa mugore re2008.
Zvigadzirwa zvikuru zveMAPLEFRP® zvinosanganisira FRP rutsigiro danda, FRP silo, FRP thermal cover, FRP liquid feed tank, FRP kudziyisa pad, BMC pit pit, FRP yakafemerwa mweya inovhara, pedza mweya mafeni, macomputer incubators, inoumbwa yekurima fomati, inosanganiswa yekurima tangi, fiberglass hove tangi , uye zvimwe zvigadzirwa, izvo zvakawana patent yenyika uye zvakanyanyo shandiswa kuvaka mapurazi emombe ezvipfuyo.
Fekitori yedu yechipiri nyowani yakamisikidzwa mugore ra2019, iye anonyanya kuburitsa gate rekubata, BMC kana pasi repurasitiki, yekudyisa zvishongedzo, mupi, mupi wekumwisa, munwi, mukombe wemvura, yehuku zvigadzirwa zvepurazi, otomatiki nyini yekumwa, broiler feeder uye zvimwe zvipfuyo zvipfuyo. .
Zvigadzirwa zvedu zvinopa yakanaka ngura-kuramba, anti-kuchembera chivakwa, asidhi uye alkali kuramba, hapana ruvara runopera, rwakatsetseka uye rwakatsetseka pamusoro uye kugadzikana kubata.
Yedu yekugadzira tekinoroji inosanganisira Pultrusion, SMC / BMC, jekiseni repurasitiki, RTM / VIP, kukanda, kutenderera, kurova, kubaya uye zvichingodaro.
Isu takaisa epamberi michina yekugadzira michina kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Tine nyanzvi yekugadzira dhizaini timu, yemhando yepamusoro mbishi yekugadzira zvigadzirwa, yepamusoro yekugadzira michina uye nehunyanzvi sevhisi system, yekukupa iwe mhando yepamusoro, dzakasiyana, dzakarongeka uye dzakasarudzika masevhisi.
Zvigadzirwa zvedu zvinogara chinzvimbo chekutanga mumusha musika. Zvichakadaro, zvigadzirwa zvedu zvinosvika kune epasi rose zviyero. Iye zvino tinoshandira pamwe nemakambani mazhinji ekushambadzira muChina. Uye zvakare, zvigadzirwa zvedu zvakatengeswa kuAmerica, Canada, France, Australia, Netherlands, Germany, Denmark, Brazil, Colombia, Japan, Thailand, South Korea zvichingodaro.
Gamuchira noushamwari kutumira kubvunza kwatiri. OEM inogamuchirwawo.
Tichaita zvese zvatinogona kuti tisangane nezvaunoda neyedu yekupedzisira-yekumira shopu sevhisi.
Nemhando yepamusoro uye nemitengo inonzwisisika, isu tine chivimbo chekuve wako akavimbika mudiwa.